के आईफोनले थाहै नदिई तपाईँको ‘जासुसी’ गर्छ ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
के आईफोनले थाहै नदिई तपाईँको ‘जासुसी’ गर्छ ?
अद्यावधिक नभएसम्मका लागि भने एपलले फेसटाइममा एकैपटक दुई जना भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले कुरा गर्न मिल्ने सुविधा हटाएको देखिएको छ।
प्रविधिसम्बन्धी एउटा ब्लगले सार्वजनिक गरेको उक्त समस्या दुवै प्रयोगकर्ताले १२.१ वा त्यो भन्दा नयाँ भर्सनको मोबाइल अपरेटिङ प्रणाली भएको आइफोन प्रयोग गरेको अवस्थामा देखा पर्ने बताइएको छ।
‘राष्ट्रिय गोपनीयता दिवस’
समूहमा वार्तालाप गर्दा सो एपले समूहमा निम्ताउनेबित्तिकै प्रयोगकर्ताले कल नउठाएपनि आफै मोबाइलको माइक्रोफोनलाई सक्रिय गराइदिने कारणले गर्दा यो समस्या देखिएको हो।
कल नउठेर घण्टी जान बन्द भएपछि माइक्रोफोन पुन: आफैँ बन्द हुन्छ। कल काट्दा वा कल आइरहेको बेलामा मोबाइल फोन बन्द गर्दा भने प्रयोगकर्ताको जानकारीबिना छोटो भिडियो कल गर्ने प्रयोगकर्तालाई पठाइने सो ब्लगले बताएको छ।
“हामीले समस्याका बारेमा थाहा पायौँ र हामीले यसको समाधान निकालेका छौँ जुन यो साता नै अद्यावधिक गरिने छ,” एपलले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी ज्याक डोर्सेसहित अन्यले फेसटाइमलाई निष्क्रिय पार्न सुझाव दिएका छन्। फेसटाइमलाई आइफोनको सेटिङमा गएर निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ। एपलका प्रमुख टिम कूकले नेतृत्व गरेर अमेरिकामा मनाइएको राष्ट्रिय गोपनीयता दिवसकै दिन आइफोनमा रहेको यस्तो गोपनीयता भङ्ग हुने समस्या सार्वजनिक भएको हो।
“आजको दिनमा गोपनीयता संरक्षणका लागि काम गर्न र सुधार गर्न माग गरौँ,” उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। हालै लास भेगासमा भएको इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी ठूलो व्यापार तथा प्रविधि प्रदर्शनीमा एपलले आफ्ना उत्पादनहरूको गोपनीयतासम्बन्धी उच्च क्षमताबारे प्रचार गरेको थियो।
एपलले सो प्रदर्शनीमा भाग नलिए पनि नजिकै ठूलो प्रचार सामग्री राखेको थियो जसमा लेखिएको थियो, “तपाईँको आइफोनमा जे हुन्छ, त्यो आईफोनमै रहन्छ।” बिबिसिबाट